12 Famantarana ny fifandraisana vita fanoloran-tena (+ zavatra 6 midika ho anao izany) - Fifandraisana
12 Famantarana ny fifandraisana vita fanoloran-tena (+ zavatra 6 midika ho anao izany)
Ny teny hoe fanoloran-tena dia fehezina amin'ny toerana mahatsiravina, ary ny tahotra fanoloran-tena dia zavatra resahin'ny rehetra ankehitriny.
Etsy ankilany, misy olona mampiasa maivana loatra ilay teny, fa tsy mankasitraka ny tena dikan'ny hoe manolo-tena amin'ny olona iray.
Raha eo amin'ny fifandraisana ianao ary manontany tena ianao raha tena mihatra sy tena mihatra aminy ilay teny hoe 'nanolo-tena' dia tonga amin'ny toerana mety ianao.
Ny fifandraisana manolo-tena dia mety manana endrika maro. Malalaka tanteraka ny mpivady rehetra hametraka ny lalàny manokana raha ny amin'ny fandaharam-piainana na ny tokana sy ny tsy manambady tokana.
Na izany aza, ny vaovao tsara dia misy fambara maro be fa eo amin'ny fifandraisana manolo-tena izay mihatra amin'ny ankamaroan'ny olona, ​​na aiza na aiza ny fari-taninao mandainga ary na izany aza mandeha ny fifandraisanareo.
Ireto misy vitsivitsy monja amin'izy ireo.
1. Mandany fotoana be dia be miaraka ianareo.
Be atao ny fiainana maoderina ary manana an-tapitrisany sy zavatra iray foana isika. Ka raha manamboatra fotoana kely ilaina ianao handaniana olona tokana dia famantarana tsara izany fa samy manolo-tena amin'ny fifandraisana ianareo.
Marina, mety hiafara amin'ny fandaniana fotoana be dia be ianao rehefa mifankahita voalohany ary samy esorina amin'ny fientanentanan'ny vaovao sy tsy fantatra, fa raha mijanona mandany fotoana be dia be indray mandeha ianareo rehefa mifankahalala, izany no famantarana fa tena manolo-tena ianareo roa.
Tsy misy olona hanokana fotoana manan-danja amin'ny fotoana malalaka ananany miaraka amin'ny olona iray izay tsy dia matotra izy ireo amin'ny fikolokoloana fifandraisana.
2. Miara-mandeha vakansy ianareo.
Ny fialan-tsasatra kely dia azo alamina amin'ny fotoana fohy ary fomba tsara mifankahalala eo am-piandohana, fa ny fialan-tsasatra feno izay maharitra mihoatra ny andro vitsivitsy amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy alamina mialoha.
Fanampin'izay, tokony ho azonao antoka tsara fa tianao ny olona iray maniry te handany azy tontolo andro miaraka aminy mandritra ny andro maromaro misesy.
Mandany izany vola rehetra izany ianao satria te hanana fotoana mahafinaritra sy manao fahatsiarovana, ary tsy handany ny fotoananao fialan-tsasatra sarobidy ianao raha tsy zava-dehibe aminao ilay olona miaraka aminao.
Ny bonus miaraka amin'ny fialan-tsasatra miaraka dia ny fahitanareo ny tsirairay avy ao amin'ny faritra fampiononanao, izay midika fa mifankahalala bebe kokoa amin'ny vadinao ianao.
3. Mieritreritra azy ireo ao amin'ny supermarket ianao.
Raha eo am-panoloran-tena amin'ny olona iray ianao, dia mety ho eo an-dohan'ny eritreritrao ny ankamaroan'ny fotoana.
Ny olona sasany dia tsy maneho ny fitiavany amin'ny alàlan'ny fividianana zavatra kely ho an'ny olon-kafa, ary tena tsara izany, satria hanana fomba kely maro hafa izy ireo.
Saingy, raha hitanao fa manangona zavatra ho azy ireo ao amin'ny supermarket matetika, na mividy azy ireo hadalana, fanomezana kely heverinao fa ho tian'izy ireo, na maka fotsiny ireo zavatra fantatrao fa mila azy ireo, na manao toa anao koa izy ireo, dia matotra io.
4. Miresaka momba ny ho avy ianao.
Fohy ny fiainana, koa raha manao drafitra amin'ny ho avy ianao ka mandray an-tanana ilay olona iray hafa, dia famantarana tsara dia tsara fa eo ianao mandritra ny fotoana maharitra.
Tsy miresaka momba ireo zavatra ireo ny olona, ​​ankoatr'ireo sangisangy amin'ny daty voalohany momba ny fiantsoana ny zanakao.
Ny fifanakalozan-kevitra marina momba ny hoavin'ny hoavinao dia zavatra iray izay hitranga eo anelanelan'ny olona roa izay mieritreritra fa mety nahita vady aman-janany.
5. Mahafoy tena ianareo.
Ny zavatra mety ho toa tombontsoa lehibe loatra hatao amin'ny olon-kafa rehetra eto ambonin'ny planeta, afa-tsy ny reninao, dia voajanahary tanteraka azonao atao ho an'ny vadinao.
Rehefa manolo-tena amin'ny olona iray ianao dia ara-dalàna ny fanaovan-javatra ho azy ireo izay mety hanelingelina anao nefa tsy mieritreritra azy intsony.
Na ny fampiakarana azy ireo, ny famolavolana ny drafitrao, na ny fandanianao ny fotoananao sarobidy izay tsy ananan'izy ireo fotoana, dia tena tsara ny fahavononanao hanao ireo zavatra ireo ho azy ireo ary ho anao izy ireo famantarana
6. Lazao azy ireo ny tsiambaratelo.
Efa hitanao fa mitantara zavatra amin'izy ireo ianao izay vitsy ny olona mahalala momba anao? Fantatr'izy ireo ve ny fanirianao miafina, sa efa nozarainao taminy ny taolana tao an-tranon-dohan'ny fianakavianao?
Efa nizara fahatsiarovana maharary tamin'ny fahazazanao ve ianao, na niresaka momba ny fomba naharatrana anao tamin'ny fifandraisana teo aloha?
Vonona ny malemy eo alohan'ilay tianao dia marika azo antoka fa mikasa ny ho amin'ity zavatra lava ity ianao.
7. Tsy lany zavatra horesahina mihitsy ianao.
Moa ve ianao mahatsapa fa tsy misy fotoana fotsiny hiadian-kevitra momba ireo zavatra tadiavinao rehetra? Amin'ny faran'ny andro iray izay tsy mbola niresahanao tamin'izy ireo, manana fanavaozana iray tapitrisa sy iray ho azy ireo ve ianao?
Mahaliana anao ny sain'ny tsirairay ary manana resadresaka lava sy lalina izay midika hoe very fotoana ianao. Raha tsy nifanolo-tena ianareo dia tsy hampiasa izany fotoana na hery ara-tsaina izany.
8. Mifampahery ny fiainana ara-tsosialy.
Olona roa mampiseho fifikirana amin'ny tsirairay dia tsy mila mandany 24 ora isan'andro ao am-paosiny.
Matoky tena tsara izy ireo amin'ny fifandraisana fa tsy mila miaraka tsy tapaka, ary miaiky izy ireo fa zava-dehibe ho an'ny mpiara-miombon'antoka ny mitazona ny fiainam-piaraha-monina, ny faribolan'ny finamanana ary ny tombontsoany.
9. Tsy afaka manao ampy ho azy ireo ianao.
Raha tena manan-danja aminao ny vady tantaram-pitiavana dia lasa fanao ny manao zavatra kely tsy tapaka ho azy ireo.
Manao araka izay azonao atao ho azy ireo ianao, saingy mbola mahatsapa foana ianao fa tsy manao zavatra ampy hanehoana aminy ny halehiben'ny fitiavanao azy ireo.
10. Eo an-tampon'ny lisitra laharam-pahamehana ianareo.
Na dia samy manomana fotoana mandany fotoana miaraka amin'ny namanao sy ny fianakavianao aza ianao ary tsy te hahafoy ireo fifandraisana ireo dia mbola mifanao loha laharana ihany aloha.
11. Manao drafitra manodidina ny fialantsasatra ianao.
Tsy ny olon-drehetra no mandany ny vanim-potoanan'ny fety (na fialantsasatra hafa) miaraka amin'ny fianakaviany, fa raha manana fomba amam-panao miaraka amin'ny fianakavianao na ny namanao taloha ianao na ny sakaizanao nefa mbola maneho fahavononanao hanova ireo drafitra ireo hiarahana miaraka, dia tena tsy manana izany ianao ahiahy amin'ny fanoloran-tena eo aloha.
12. ‘We’ ianao.
Ny fiteny ampiasaintsika ho azy, tsy mieritreritra, dia manondro be indrindra ny fihetsem-pontsika.
Raha maheno ny sakaizanao miresaka anao ho toy ny singa ianao, na mahita ny tenanao mieritreritra fa tafiditra ao anaty fanasana izy satria ao an-tsainao tonga fonosana ianao, dia marika tsara izany fa ekipa ianareo roa.
Inona no dikan'ny fifandraisana manolo-tena ho anao?
Raha misy olona sasany mety mihevitra ny fanoloran-tena amin'ny fomba ratsy na matahotra azy, dia mety ho zavatra tsara tarehy ny fifandraisana amina olombelona hafa.
Fa rehefa vaovao dia mety ho somary manjavozavo kely daholo.
Nametraka ny mariky ny fifandraisana feno fanoloran-tena izahay, saingy inona no tena dikan'izany?
Raha faritany vaovao ho anao io dia mety tsy azonao antoka ny mety hisehoan'ny fanoloran-tena amin'ny olona iray hafa amin'ny fiainanao, ary inona no vokatr'izany ho anao roa.
Ahoana no mety hanovana ny tena fanoloran-tena amin'ny fiainanao?
1. Manapa-kevitra amin'ny roa ianao.
Tsy manodidina anao intsony izao tontolo izao. Manomboka izao, ary angamba mandritra ny androm-piainanao, ny fanapahan-kevitra raisinao, na lehibe na toa kely, dia mety hisy fiantraikany amin'ny olon-kafa.
Andraikitra lehibe izany, ary zavatra mitaky saina matotra afaka mijery mihoatra ny filany feno fitiavan-tena.
Izany no antony iray lehibe mahatonga ny olona maro hanoro hevitra ny tsy hiditra amin'ny fiarahana manolo-tena raha mbola tanora dia kely ianao, ary alohan'ny fotoana anananao matotra.
2. Manome lanja ny filan'ny namanao ianao mitovy amin'ny anao.
Amin'ny fifandraisana feno fanoloran-tena dia lasa mihevitra ny filan'ny vadinao ho manan-danja toy ny anao koa ianao. Raha ny salama ny fifandraisana , tsy tokony hisy ambaratongam-pahefana eo aminao, ary fanajana tanteraka .
3. Lasa fenitra ny fifampiraharahana.
Rehefa mpitovo ianao dia tsy tapany lehibe amin'ny fiainana ny marimaritra iraisana. Fa rehefa misy roa aminareo tafiditra ao dia tsy afaka manana ny lalanao foana ianao.
Ny mety ho anao dia hanaiky zavatra maro ianao, fa hisy koa zavatra maro izay tsy hitovizanao. Amin'ny fifandraisana manolo-tena dia ho hitanao tsy ho ela fa ny fikajiana haino aman-jery sambatra dia lasa fomba vaovao anaovanao zavatra.
4. Izy ireo no lasa namanao akaiky indrindra.
Rehefa mandany fotoana be dia be amin'ny olona iray ianao ary mahazo fahitana toy izany amin'ny psyche azy, dia tena tsy ho vitany mihitsy ny tsy ho lasa namanao akaiky indrindra, ary koa ny olon-tianao sy ny namanao.
Izy ireo dia lasa confidante anao, mpanolo-tsaina anao ary ny sorokao hitomanianao.
5. Tonga mpianakavy ianareo.
Rehefa mandroso hatrany ny raharaha dia manomboka mifankahita ianao mianakavy, ambonin'izay zavatra hafa rehetra.
Tena mifamatotra amin'ny fiainan'ny tsirairay ianao, toy ny fianakaviana ihany, tsy azonao an-tsaina izao tontolo izao tsy misy azy ireo, na dia tsy maintsy ihodinanao aza izy ireo.
Tonga fianakavian'izy ireo ny fianakavian'izy ireo, ary lasa fianakaviany ny fianakavianao, ary manaiky ianao, mifamatotra amin'ny, indraindray, tsy maintsy miaritra amin'ireo olon-tiany ho azy ireo.
6. Miady ianao, nefa fantatrao fa tsy maninona izany rehetra izany.
Ny fanoloran-tena amin'ny olona iray ary ny fahafantarana fa nanolo-tena taminao izy ireo dia midika fa azonao atao ny mandefa ny fahasosoranao ary tsy mifanaraka amin'izy ireo nefa tsy manahy ianao fa midika ho rava ny fifandraisanao.
Ny mpivady rehetra dia misy tohan-kevitra, fa kosa ny mpivady matanjaka sy manolo-tena tena mahalala fa tsy misy dikany ireo adihevitra ireo raha oharina amin'ny fitiavana ananan'izy ireo.
Mbola tsy azonao antoka ve ny dikan'ny hoe ao anatin'ny fifandraisana vita fanoloran-tena? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
ny fomba hiverenana miaraka amin'ny fiainako
mametraha ny hafa mba hahatsapa ho salama tsara
tanjona tsara hapetraka ho anao
inona no hatao aorian'ny tratranao misoloky
hevitra mahafatifaty ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny sipanao